Vakabayiwa Nhomba yeCovaxin Vokurudzirwa Kubayiwa Dzimwe Nhomba Dziri Kuwanikwa Munyika
Nyamavhuvhu 27, 2021
Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika sezvo Covaxin isiri kuwanikwa.
Zvichitevera kushaikwa kwenhomba yeCovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga, mukuru wezvehutano mukanzuru yeHarare, Dr Prosper Chonzi, vati vanhu ava vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
VaChonzi vati nhomba yeCovaxin yanga iri shoma munyika huye nhomba iyi yakapera simba muna Chikumi.
VaChonzi vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi vakati kuti munhu ave nedziviriro yakakwana, anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezvehutano muMDC Alliance, VaHenry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Mukuru weCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike, vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin nevakabaiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezvehutano, VaDonald Mujiri, vati havasati vasumwa pamire hurumende yanyaya yekubayiwa kwevanhu vakawana nhomba yekutanga yeCovaxin
Zimbabwe yakapihwa neIndia nhomba dzeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu uye hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi.
Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu, kana kuti 13 million doses.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti Covid-19 yakauraya vanhu gumi nevasere, uye vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare.
Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu (123 986), uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvinanemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu, (4 356).
Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe (2 453 529).
Vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere(1 561 368).
Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi.